မင်းကြောင့် မဟုတ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မင်းကြောင့် မဟုတ်ပါ
Posted by မောင်ဆန်း on Jun 13, 2011 in My Dear Diary | 19 comments
ပြီးခဲ့တဲ့လက weekly eleven မှာ လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းလေးတစ်ခု ဖတ်လိုက်ရပါတယ်…
တောင်ငူခရိုင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာ အလယ်တန်းပြဆရာမတစ်ယောက်ကို သူနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ သီတာမိုးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကတွေ့ပြီး
အသက် ၂၁ နဲ့ ၁၈ အရွယ်ရှိတဲ့ ဆရာမရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကို တရုတ်က အလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရင် တစ်လကို စရိတ်ငြိမ်း
တစ်သိန်းရမယ်လို့ ပြောဆိုစည်းရုံးတာကို ယုံကြည်တာနဲ့ ၂၀၁၀ ဇူလိုင်လထဲမှာ ရွှေလီဘက်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ် ဟိုရောက်တော့
သီတာမိုးက သူ့ညီမဖြစ်တဲ့ အိစန္ဒာဆီကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ် တကယ်ကျ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးက အလှပြင်ဆိုင်မှာ အလုပ်မလုပ်ရပဲ အိစန္ဒာရဲ့
ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုး ထန်ဘော ပိုင်တဲ့ အနှိပ်ခန်းမှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် အဓမ္မ စေခိုင်းလို့ ပြည့်တန်ဆာတွေအဖြစ် ခုနစ်လလောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်
နောက်ဆုံး အဲဒီအနှိပ်ခန်းကနေ ထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက် စီချွမ်းပြည်နယ် ရဲစခန်းမှာ လေးလလောက် အထိန်းသိမ်းခံရပြန် လွတ်မြောက်လာတဲ့နောက်လည်း
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှာ ကိုးလလောက်လုပ်ရပြီးမှ ကံကောင်းစွာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးက တိုင်လို့
သီတာမိုးကို လူကုန်ကူးမှုနဲ့ အရေးယူ၊စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့
ပြီးခဲ့အပတ်က ကိုလင်းဝေကျော်ရဲ့ “ မှုခင်းဖြစ်ပွားနှုန်း” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၁၁ အတွင်း ၁၀ နှစ်တာကာလမှာ
မုဒိန်းမှု ၇၅၅ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ ဒီစာရင်းက ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုထဲဆိုတော့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဆို တွေးတောင်မကြည့်ရဲလောက်အောင်ပါပဲ
ဒါက ရဲစခန်းကိုလာတိုင်လို့ တရာဝင်အမှုဖွင့်တဲ့စာရင်းပဲဖြစ်မှာပါ ရှက်လို့ကြောက်လို့ မတိုင်တဲ့အမှုတွေ နောက် .. ဖြစ်ပြီးတော့မှ တနည်းနည်းနဲ့ စည်းရုံးခံရ
အလျှော့ပေးလိုက်ရလို့ ရဲစခန်းမရောက်တဲ့ အမှုတွေလဲ အများအပြားပါ မတရားမှုကိုမခံနိုင်လွန်းလို့ တိုင်ကြားပြီတဲ့နောက်မှာတောင် အမှုကိုသေချာဘို့
တရားရုံးမှာ စစ်မေးချိန် မိန်းကလေးနဲ့ မိသားစုအတွက် တရှက်ကနှစ်ရှက်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေပါ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ မျက်မြင်သက်သေဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ
တရားရုံးက အပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ တရားခံကိုအပြစ်ပေးမှာပေါ့
လူကုန်ကူးခံရ အဓမ္မမှုတွေကျူးလွန်းခံရတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ နစ်နာသူမိန်းကလေးတွေက တိုင်ကြားလို့ သက်ဆိုင်ရာက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို
အရေးယူ အပြစ်ပေး ထောင်တွေချလိုက်ရုံနဲ့ ဒီကိစ္စတွေက ပြီးဆုံးသွားပြီ၊နစ်နာမှုတွေက ကျေပျက်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရပြီလား…
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ စကားတစ်ခုရှိပါတယ် “အရှက်နဲ့လူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး အသက်နဲ့လူလုပ်တာ” ဆိုတဲ့စကားလေးပါ ဒီအတွေးအခေါ်တွေကြောင့်ပဲ
ဆရာမသမီးနှစ်ယောက်ဆို သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည်ဘို့ ခဲယဉ်းသွားပါပြီ လာဘ်စားလို့ မဟုတ်တာလုပ်လို့ကြီးပွားသွားတဲ့လူတွေကို အထင်အမြင်
မသေးတဲ့အပြင် အထင်ကြီးအားကျတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာ “ သူပေါ့ မုဒိန်းကျင့်ခံလိုက်ရလို့ တရားရုံးမှာ စစ်နေတာလေ” ဆိုပြီး သနားတာလိုလို အထင်သေး
တာလိုလိုနဲ့ ကြည့်မဲ့လူ ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်မဲ့သူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပါ
တကယ်ဆို ဒီကိစ္စတွေက သူတို့ဆိုးသွမ်းလို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေကြောင့်သာဖြစ်ခဲ့ရတာပါ သူတို့မှာဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး သူတို့တွေ သတ္တိရှိရှိ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘ၀မှာရပ်တည်သွားနိုင်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကကူညီသွားရမှာပါ ကူညီနေတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ် “ဒီလိုဖြစ်ရတာ ကိုယ့်ကြောင့်
ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ဘူး အဲဒီအတွက် ဘာမှ ရှက်ရွံ့သိမ်ငယ်နေစရာမလိုဘူး”ဆိုတဲ့အားပေးစကားနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံ အစော်ကားခံနေရတဲ့သူတွေကို ကူညီအားပေးနေတဲ့
အော်ပရာဝင်းဖရေး ကိုယ်တိုင်လဲ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တဲ့ အခြေအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပျက်တာ ဘ၀ကိုအရှုံးပေးတာမျိုးမလုပ်ပဲ
သတ္တိရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အာဖရိကန် အမေရိကန်လူမည်းတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ အော်ပရာက လူသားတွေ အတွက် ခွန်အား ဖြစ်စေ မဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို
Time မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် “မင်း အကြောက်ဆုံးအရာက တကယ်တမ်းတော့ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး တကယ့်ကြောက် စရာက ကြောက်နေတဲ့ မင်းရဲ့စိတ်ပါ ”တဲ့ ……..
“အရှက်နဲ့လူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး အသက်နဲ့လူလုပ်တာ” ကိုလည်း
“အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး အရှက်နဲ့လူလုပ်တာ” လို့ ပြင်ဖတ်သွားပါတယ်
ကျေးဇူးပါ ကိုငြိမ်းချမ်း ခင်ဗျာ လောသွားတဲ့ ကျွန်တော့်အမှားပါ
အားလုံးပဲ ပြင်ဖတ်ပေးကြပါနော် :D
လူသိ..တာတွေ ပါသလို.. ဘယ်သူမှ မသိခဲ့တာတွေလည်းပါမယ်…
ဒါတွေက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ ရောဂါတွေပါ…
ဗိုလ်ချုပ် ပြောခဲ့တဲ့.. ဖာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ….
ကျေးဇူးပါ.. nozimi ရေ… ဒီလို ပိုစ့်လေးတွေကို ထပ်တင်ပေးပါဦး… အားပေးနေပါတယ်..
ဒီမိန်းကလေးငယ် ၂ ယောက်လိုမျိုးကြုံတွေ့ရသူတွေကို အားပေးရမယ်။
သတ္တိရှိရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဘ၀မှာရပ်တည်သွားနိုင်အောင် ကူညီရမယ်။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့က “ပတ်ဝန်းကျင်” လို့ခေါ်တဲ့ သူတို့ဝန်းကျင်က လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ
ဒါကို အထင်သေးစရာ မေးငေါ့စရာ ပုံမှန်လိုလက်မခံနိုင်စရာ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ ဥပမာ – ကိုယ့်သားက ဒီမိန်းကလေးမျိုးကိုကြိုက်ရင် လက်ခံမယ့်မိဘ တော်တော်ရှားဦးမှာပါ။
ရေရှည်အတွက် ဖြေရှင်းချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အပျိုစင်ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတဲ့အပေါ်ထားတဲ့ အမြင်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။
လတ်တလောအတွက်ဖြေရှင်းချက်ကတော့ တာဝန်လဲသိ တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ လူတယောက်ယောက်က ဒီမိန်းကလေးမျိုးကို အလုပ်ခေါ်ပေး၊ သင်တန်းစသည်တက်ခိုင်းပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေး၊ နေရာပေး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေး ရင်းနဲ့ သူ့အစွမ်းအစကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖေါ်ထုတ်ခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပါပဲ။ အဲသလိုဆိုရင်တော့ ဒီမိန်းကလေးမျိုးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု့လဲရှိလာပြီး လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလဲ အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ခေါ်ပေးသူအတွက်လဲ လူယုံ တပြည့်ကောင်းတယောက် ရလိုက်မှာမို့ win – win approach လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။
ဒီကွန်မင့် က ၀င်မန်းရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ – တတ်နိုင်သူတွေကိုလဲ တိုက်တွန်းတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သတ္တလောကမှာ အသက်ဆိုတာကလည်း မရမ်းအရေးပါလှပါတယ်။ အရှက်နဲ့လူလုပ်နေပေမဲ့ အသက်ရှိနေသရွေ့ လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်ရအုန်းမှာပါ။ အမှားမရှိတဲ့လူရယ်လို့ ပုထုဇဉ်လောကမှာတော့ မရှိသလောက်ပါ။ အဲဒီအမှားဟာ သူကိုယ်တိုင်ကြောင့် မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ အဲဒီအမှားကို ကိုယ်ကိုတိုင်က သိ သိချိန်ကစပြီး ပြုပြင်ဘို့လိုပါတယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အမှားကို ၀ိုင်းဝန်းပြုပြင်ဖေးမပြီး အားပေးကြရမှာပါ။
ခင်ဗျားပြောသလို အမှားရှိသလို အမှန်လည်းရှိနေတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလည်း နားလည်မှု့အပြည့်နဲ့ ဖေးမကြပါစို့လို့။
တရုတ်ပြည်ထဲမှာ ၅ နှစ်နီးပါးနေခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်အတွင်း အဖြစ်အပျက်တစ်ချို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် … တရားမ၀င်နေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးအမျိုးသမီးတွေကို ဖမ်းမိလေ့ရှိပြီး ဘာသာပြန်ပေးဖို့ သွားရင်း ကြုံဖူးတာလေးတွေပါ … အများအားဖြင့် ရှမ်းပြည်ဘက်က ကောင်မလေးတွေဖြစ်ပြီး တရုတ်စကားလဲတတ်နေကြတယ် … သူတို့က တရားမ၀င်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ် … တချို့က စားသောက်ဆိုင်တို့ နိုက်ကလပ်တို့မှာ လုပ်နေကြရင်း ဖမ်းမိတာဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ တရုတ်မယားအနေနဲ့ တရုတ်တွေက ၀ယ်ယူပေါင်းသင်းထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ် … အားလုံးကတော့ သူ့အကြောင်းနဲ့သူပါပဲ … သူတို့တွေကလဲ အမှန်အတိုင်း ဘယ်တော့မှ မပြောပြကြလို့ ဘာကြောင့်ဆိုတာတွေတော့ ကျွန်မလဲ မသိခဲ့ပါဘူး …
အေးဗျာ… ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ… အားလုံးလက်တွဲ ကူညီ သွားသင့်ပါတယ်…:(
အားလုံးက အသိရှိရှိ ၀ိုင်းပြီး ကာကွယ်မှ အမျိုးကောင်း သားသမီးတွေ မကောင်းတဲ့ လူတွေ ရဲ့ ဘေးက လွတ်မှာပါ။
စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တလဘယ်လောက် ရမယ် ဆိုပြီး သိမ်းသွင်းခံရတာများတယ်။
ဟိုနေ့ က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာတွေ့လိုက်သေးတယ် လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးကို နစ်နာကြေးပေးတာ ဘယ်လောက်များမှတ်တယ်.. ငွေ သုံးသောင်းတဲ့ မြန်မာငွေနော်…။ အဲဒီလောက် နစ်နာကြေးများ ပေးမနေ တာမှပိုကောင်းဦးမယ်
(မင်း အကြောက်ဆုံးအရာက တကယ်တမ်းတော့ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး တကယ့်ကြောက် စရာက ကြောက်နေတဲ့ မင်းရဲ့စိတ်ပါ ”တဲ့ …)
အဲဒီ စာသားလေးကို ကြိုက်တယ်။
မင်း အကြောက်ဆုံးအရာက တကယ်တမ်းတော့ ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး တကယ့်ကြောက် စရာက ကြောက်နေတဲ့ မင်းရဲ့စိတ်ပါ တဲ့ အဲဒီစာသားက လူတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပေးပါဘဲရှင့်
What keeps you from being your best self? Usually the answer is fear. What’s interesting about fear is that the thing you fear has no power. “Your fear of it is what has the power. Facing the truth really will set you free.” (Oprah Winfrey)
အပေါ်ကစာတွေက .. အော်ပရာပြောတဲ့.. အပြည့်အစုံပဲ..။
Facing the truth really will set you free. ကိုမူရင်းကနေ.. ဘာသာပြန်သူက ဘာလို့ဖြုတ်ထားခဲ့သလည်း မသိဘူး..။ အဲဒီတော့ “အဖြည် “(မကြောက်အောင်.. ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့.. ဖြေရှင်းချက်) မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်..။
“အမှန်တရားကို လက်ခံရင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အကြောက်တရားရဲ့လောင်းရိပ်အောက်က လွတ်မြောက်သွားသူဖြစ်သွားမယ်… “ဆိုတာလေး ဖြည့်သင့်တယ်..။
တကယ်တော့.. Freedom From Fear ကိုတနည်းဖွင့်ပြထားတာပဲလို့ထင်တယ်..။
“မကြောက်ကြနဲ့..၊ သစ္စာတရားကိုင်စွဲထား”… လို့..မြန်မာမှုပြုတိုတိုဘာသာပြန်ချင်တယ်..။
ဒီတစ်ခါတော့ သဂျီးကို ချွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံပါတယ်။
ငယ်ငယ်က သော်တာဆွေရဲ့ မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ရဲရင့်ခြင်း စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး စိတ်အားပြည့်ခဲ့ရ သလိုပဲ ခံစားမိပါတယ်။
သစ္စာတရားကို စွဲကိုင်ထား…အကြောက်တရားက လွတ်မြောက်မယ်…
သစ္စာတရားကို စွဲကိုင်ထား.. သင့်စိတ်တွေ လွတ်လပ်သွားလိမ့်မယ်..
ဘာကို မဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ.. မကြောက်တော့ပါဘူး..
သစ္စာတရားကို ကိုင်စွဲထားမှာပါ.. အကြောက်တရားတွေ ကင်းအောင်ပေါ့..
ကျွန်ုပ် ပြောင်းလဲနိုင်သော အရာများကို
ပြောင်းလဲရန် ရဲရင့်သည့် သတ္တိ။
ကျွန်ုပ် မပြောင်းလဲနိုင်သော အရာများကို
ထိုနှစ်မျိုး၏ ခြားနားမှုကို သိရန် ဥာဏ်ပညာ….
မြန်မာလိုလေးပဲ ဖတ်မိပြီး သဘောကျလို့ မှတ်မိနေခဲ့တာ မူရင်းစာသိရလို့ရော ဖြည့်စွက်ပေးတာအတွက်ပါ
သူကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်ကြ မန်းကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဒီအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ညီမအရွယ် တူမအရွယ် မိန်းကလေးငယ်တွေ ဒီစာလေးတွေ့လို့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားရမယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီအားပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
အသက်နဲလူလုပ်တဲ့ ကိစ္စလေးလဲ ပြောချင်ပါသေးတယ်
မြန်မာစကားမှာ “ အသက်နဲ့ လူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး အရှက်နဲ့လူလုပ်တာ” ဆိုတဲ့ စကားရှိပေမဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကတော့ “အရှက်နဲ့လူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး အသက်နဲ့လူလုပ်တာ” လို့ ကြုံးဝါးလေ့ ရှိပါတယ် ဘာလဲပေါ့ သူ့အကြောင်းသိရတော့လဲ သူပြောတာမှန်သလိုလိုရှိသား
သူ့အမျိုးသား နာမည် မှာ “ သက်” ပါတာကိုဗျ အသက်နဲ့လူလုပ်တာ သားလေးတောင် တော်တော်ကြီးမှဘဲ